5 Zvikonzero nei nharaunda ichifanira kudzokorora | Green Renewables
El marara marara ndiyo yakanakisa system yekurasa kwekupedzisira kwezvinhu uye zvigadzirwa zvinofungidzirwa junk. Zvinhu zvisingachagone kushandiswa nechinangwa chavakagadzirirwa kana izvo zvakapedza hupenyu hwavo zvinofanirwa kudzokororwa.
Dongo rakasimba remaguta rakanetsekana nemaguta nemataundi nekuti ivo vanofanirwa kubata matani emarara pazuva. 90% yemarara anowanikwa munzvimbo yemumba anogona kudzokororwa.
Pane zvikonzero zvishanu nei nharaunda ichifanira kukurudzira nekuvandudza marara.
Kuunganidzwa kwemarara munzvimbo dzekuviga marara kwaderedzwa, matambudziko ehutano hweveruzhinji anodzivirirwa, iyo ckusvibiswa mvura, mhepo, ivhu nematambudziko ezvakatipoteredza senge kutemwa kwemiti, pakati pezvimwe.
Mari inokosha inogona kuitwa kubva mukutengesa zvigadzirwa uye zvigadzirwa mushure mekugadzirisa zvakare. Pamusoro pe simba rekuchengetedza uye zviwanikwa zviwanikwa mukugadzirwa kwezvinhu zvitsva.
Kudzokorodza kunoita kuti zviwedzere hupfumi Management hurongwa marara uye inovandudza rucheno munharaunda.
Kuita kwekudzokorodza kunoda kuti ese mapoka emagariro agadzire mushe, nekudaro achisimbisa hukama nevevanhu nemakambani sechikamu chenharaunda.
Iyi tsika yakapusa inobatsira kudzidzisa vana nezve kukosha kwekuchengeta mwana. nzvimbo uye pesvedzero yayo pahunhu hwehupenyu.
La marara maindasitiri inofanira kusimbiswa nekukudziridzwa sembiru yezvehupfumi inokodzera munharaunda yega yega, kwete chete kudzikisa huwandu hwemarara asi senzira yekugadzira mabasa matsva uye zvigadzirwa kubva kuzvinhu zvakadzokororwa, pamwe nekugadzira purofiti padanho remunharaunda.
Izvo zvakakosha kuti ese marudzi emarara araswa zvakare nekuti iwo mabhenefiti ari akawanda chaizvo uye achiwedzera nekufamba kwenguva. Nyika, makambani akazvimirira, masangano ezvemagariro uye nzanga yese vanohwina kana ichishandiswazve.
Kuzvipira pachedu uye munharaunda zvakakosha kune iyo Zvirongwa zve dzokazve kuva kwenguva refu, kubudirira uye kuwanda. Girazi kuva mumwe wemienzaniso yakanakisa, nekuti ndicho chigadzirwa chakadzokorodzwa zvakanyanya pasi rose.
Kuwana zvimwe zvigadzirwa kusvika pamatanho akakwirira ekushandisa patsva zvinotora nguva uye rakasimba basa rekuzivisa nezvezvakatipoteredza, asi zvinogona kuitika, isu tese tinogona kubatana kuitira kuti zvimwe zvishandiswezve uye kuti pasi iva wakachena uye uine hutano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Imba yeGreen » 5 Zvikonzero nei nharaunda ichifanira kudzokorora
Marlyn Daniela Figueroa CASTRO akadaro
KUTI TINOFANIRA KUGARA TICHIGADZIRA ZVESE ZVENYU MUENZANISO YEMAHARA BHODhoro NEBANANA SHELL
Pindura Marlyn Daniela Figueroa CASTRO
Ini ndaifarira ruzivo irworwo
, yaibatsira zvikuru
Pindura kune aries
Iko kukanganisa kwesimba remhepo pane iyo nzvimbo